10 Jaamacadaha ugu raqiisan Kanada ee Barnaamijyada Shahaadada Jaamacadeed iyo Dib -u -dhigashada 2022
Halkan waxaa ku yaal liistada hadda jirta ee jaamacadaha ugu raqiisan Kanada ee loogu talagalay ardayda gudaha iyo kuwa caalamiga ah ee doonaya inay qaataan mid ka mid ah shahaadada koowaad ama shahaadada jaamacadeed ee Kanada.
Inta badan waxaad maqashaa in Kanada ay tahay hoyga ardayda caalamiga ah, tan waxaa loo sameeyay jaamacadahaan awgood oo bixiya khidmad waxbarasho oo aad u hooseysa oo waliba waxyar ka sarreysa gelitaanka iyo hoyga ardayda caalamiga ah.
1 Ku saabsan Jaamacadaha Waxbarashada Yar ee Kanada
2 Jaamacadaha ugu jaban Kanada (Jaamacadaha Yaryar ee Kanada)
2.1 Jaamacadda Brandon
2.3 Jaamacadda Alberta
2.4 Jaamacadda Mennonite ee Kanada
2.5 Jaamacadda Memorial ee Newfoundland
3 Jaamacadaha ugu raqiisan Kanada ee Shahaadooyinka Jaamacadeed
4 Jaamacadaha ugu raqiisan Kanada ee loogu talagalay Darajooyinka Masters (Shahaadada Masterka ee shahaadada hoose ee Kanada)
4.1 Jaamacadda Memorial ee Newfoundland
4.2 Jaamacadda Waqooyiga Ingiriiska ee Columbia
4.3 Jaamacadda Calgary
4.4 Jaamacadda Simon Fraser
4.5 Jaamacadda Saskatchewan
Ku saabsan Jaamacadaha Waxbarashada Yar ee Kanada
Markaan idhaahdo “jaamacadaha waxbarashada hooseeya” waxaan si ficil ah ula jeedaa jaamacado jaban; Waxaan u adeegsanayaa weedha "waxbarashada hoose" si aan kaaga caawiyo inaad fahamto markaan dhahayo jaamacadaha raqiiska ah ee Kanada, waxaan u jeedaa laga yaabee iskuulo tayadoodu hooseyso halkii aan u jeedin lahaa iskuulada leh khidmadaha wax lagu barto.
Mid ka mid ah waxyaabaha ay tahay inaad ka ogaato liistadan aan doonayo inaan sii daayo hadda ayaa ah in qaar ka mid ah iskuulada ku jira liiskan aysan ka mid ahayn jaamacadaha caanka ah ee caanka ka ah Kanada laakiin dhab ahaantii iyagu waa jaamacadaha qaadaya khidmadaha waxbarasho ee ugu raqiisan Kanada .
Kharashka iskuulka ee dibedda ayaa had iyo jeer ah arin wajaheysa ardayda doonaya inay wax ku bartaan meel ka baxsan dalkooda, gaar ahaan markay u socdaan waddamada sida Canada, Australia, China, Mareykanka ama meelo kale oo caan ah oo waxbarasho-dibadda ah.
Halkan waxaan go'aansaday inaan ku qoro qaar ka mid ah jaamacadaha raqiiska ah ee Kanada oo ku saleysan cilmi baaris shaqsiyeed si loo caawiyo ardayda caalamiga ah ee doonaya inay yareeyaan kharashyada khidmadaha.
Jaamacadaha ugu jaban Kanada (Jaamacadaha Yaryar ee Kanada)
Jaamacadda Brandon ayaa hadda ah jaamacadda ugu raqiisan Kanada barnaamijyada shahaadada koowaad ee ardayda Kanada iyo kuwa caalamiga ahba.
Jaamacadu waxay bixisaa barnaamijyo shahaadada koowaad ee shahaadada koowaad ee muwaadiniinta reer Kanada iyo deganayaasha joogtada ah ee khidmadda waxbarashada ugu hooseeya inta udhaxeysa $ 1,700 ilaa $ 4000 ugu badnaan.
Ardayda caalamiga ah waxay bixiyaan khidmadaha waxbarashada ugu hooseeya $ 7,203 - $ 7,968 ee barnaamijyada shahaadada koowaad ee jaamacadda Brandon.
Waxaad ka heli kartaa wax dheeraad ah oo ku saabsan Jaamacada Brandon khidmadaha iskuulka oo buuxa iyo inbadan oo kamid ah boggooda rasmiga ah.
Tani waa mid ka mid ah jaamacadaha jaban ee caanka ah ee Kanada oo wax ku barta luqadda Faransiiska.
Iyada oo ku saabsan 14 barnaamijyo kala duwan oo jaamacadeed oo ka socda jaamacaddan oo ay ku jiraan Kalkaalinta Caafimaadka, Teknolojiyada Macluumaadka, Maamulka Ganacsiga iyo kuwa badan oo loo aqoonsan yahay inay yihiin barnaamijyada ugu hooseeya ee shahaadada koowaad ee Kanada.
Université de Saint-Boniface waxay ku dalacdaa khidmad waxbarasho oo hooseysa ardayda caalamiga ah oo ka bilaabata qiyaastii $ 7,500 oo aan ka badnayn $ 9,000 dhammaan barnaamijyada tacliinta sare.
Muwaadiniinta reer Kanada iyo deganayaasha joogtada ah waxay ku raaxaystaan ​​khidmadaha waxbaridda ee aad uga hooseeya jaamacaddan iyada oo barnaamijyada ugu raqiisan ay ku dalacayaan khidmadaha waxbarashada ugu hooseeya $ 3,000.
Waxaad ka heli kartaa wax dheeraad ah oo ku saabsan Université de Saint-Boniface barnaamij buuxa iyo ujrooyinka waxbarida ee u dhiganta bogga rasmiga ah ee dugsiga.
Jaamacadda Alberta waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu raqiisan Kanada oo leh khidmad waxbarasho oo ah $ 5,000 ilaa $ 7,000 oo loogu talagalay ardayda caalamiga ah iyo kuwa gudaha. Xaqiiqdii, tani waa tan ugu caansan jaamacadaha wax lagu barto ee Kanada sida halkan lagu muujiyey.
In kasta oo waxbarashadaada iyo khidmadahaagu ay ku tiirsan yihiin barnaamijkaaga, badiyaa barnaamijyada shahaadada koowaad ee dugsigani waa kuwo aad u macquul ah.
Marka laga reebo ujrooyinka wax lagu barto, waxaa lagaa filayaa in kasta oo aad meel iska dhigto qaddar aad uga sarreeya $ 5000 kharashyadaada shakhsi ahaaneed ee sida dharka, cuntada, xiisaha iyo waxyaabo kale oo badan.
Jaamacadu waxay daryeeshaa qiimaha safarkaaga 8 bilood laga bilaabo Sebtember ilaa Abriil laakiin afarta bilood ee harsan waxaa lagaa filayaa inaad tan ka sameyso jeebkaaga. Waxaad ka heli kartaa wax dheeraad ah oo ku saabsan waxbarashada iyo khidmadaha kale ee Jaamacadaha Albert boggooda rasmiga ah.
Intaad goobta ku jirto, tilmaan haddii aad tahay arday Canadian ah ama caalami ah si aad u arki karto macluumaadka adiga kuu gaarka ah.
Jaamacadda Mennonite ee Kanada
Jaamacadda Canadian Mennonite labadaba khidmadaha waxbaridda iyo qorshaha cuntada oo dhammaystiran ayaa u hooseeya $ 7000 xilli-dugsiyeedkiiba iyo $ 14000 sanadkii. Tani waxay ka mid tahay khidmadaha waxbarashada ugu raqiisan ee aad ka heli karto meel kasta oo Kanada ah.
Inkasta oo aysan taasi ku filnayn, jaamacaddu waxay siisaa dhowr deeqo iyo kaalmo dhaqaale ardayda in ku dhow 50% ee ardaydeeda la siiyo mid ka mid ah kaalmada maaliyadeed ama kan kale sannad kasta.
CMU waxay leedahay ikhtiyaarro guriyadeed oo dhowr ah oo qiimo kaladuwan leh dhammaanba xerada dhexdeeda in kasta oo ardayda aan loo igman inay ku noolaadaan xerada-sida loo baahan yahay laakiin waxaa lagugula talinayaa in ardaydu ku noolaadaan xerada-jaamacadda isla markaana jaamacaddu isku daydo sida ugu wanaagsan ee ay u dhiirrigeliso dhaqankan.
Waxaad ka heli kartaa wax badan oo ku saabsan khidmadaha waxbarashada iyo khidmadaha kale ee lagu bogaadiyo CMU loogu talagalay ardayda gudaha iyo kuwa caalamiga ahba websaydhkooda rasmiga ah.
Jaamacadda Memorial ee Newfoundland
Haddii aad raadineyso jaamacado la awoodi karo oo ku yaal Kanada, Jaamacadda Memorial ee Newfoundland waa mid ka mid ah jaamacadaha ugu sarreeya liiska leh khidmadda waxbarashada ugu yaraan $ 2,550 ee ardayda dhigata shahaadada caalamiga ah.
Waa xusid mudan in la xuso in tani ay tahay jaamacadda kaliya ee halkan ka samaysay liiska jaamacadaha ugu raqiisan Kanada labadaba shahaadada koowaad iyo qalin-jabinta.
Kharashka waxbarashada ee ardayda caalamiga ah halkan inkasta oo xoogaa yar marka la barbar dhigo jaamacadaha kale ee liiskan laakiin qoraal guud, khidmadani waa mid aad u jaban oo aad u jaban marka la barbar dhigo jaamacadaha kale ee Kanada ee aan ku jirin liiskan. Ardayda caalamiga ah ee halkan jooga waxaa laga qaadaa khidmad waxbarasho oo ah $ 11,460.
Waxaad ka heli kartaa wax badan oo ku saabsan deeqaha waxbarasho, khidmadaha waxbarashada iyo khidmadaha kale ee Jaamacadda Memorial ee Newfoundland laga helo bogga rasmiga ah ee dugsiga.
Jaamacadaha ugu raqiisan Kanada ee Shahaadooyinka Jaamacadeed
Waxbarashada: $ 7,203
Barnaamijyada Darajooyinka: BA, BBA, BED, BFA, BM, BN, BSc
Waxbarashada: $ 7,482
Barnaamijyada Darajooyinka: Shahaadada Bachelor-ka.
Waxbarashada: $ 9,730
Barnaamijyada Darajooyinka: Darajada Bachelor
Waxbarashada: $ 10,003
Barnaamijyada Darajooyinka: Saddex iyo afar sano BA, BSc, BBA, iyo Barnaamijyada Master-ka.
Waxbarashada: $ 11,460
Barnaamijyada Darajooyinka: Bachelor iyo Master.
FIIRO GAAR AH: Khidmadaha kor ku xusan waxaa loogu talagalay inta badan barnaamijyada shahaadada Bachelor-ka ee iskuuladan mana ahan kuwa loo yaqaan 'Master'. Waxaan sidoo kale diyaarinay liiska shahaadada mastarka ugu raqiisan Kanada ee hoos ku xusan oo aad waxtar ugu leh kuwa u socda barnaamijka Master-ka.
Jaamacadaha ugu raqiisan Kanada ee loogu talagalay Darajooyinka Masters (Shahaadada Masterka ee shahaadada hoose ee Kanada)
Jaamacadaha hoose waxay bixiyaan barnaamijyada ugu raqiisan ee Postgraduate-ka Kanada oo ay ku jiraan shahaadada Master, Doctoral iyo Post Doctoral laakiin khidmadaha hoos ku taxan aasaas ahaan waa barnaamijka Master-ka.
Jaamacadaha Shahaadada Master's Degree ee Kanada
Waxbarashada: $ 3,222
Jaamacadda Waqooyiga Ingiriiska ee Columbia
Location: Amiir George, British Columbia
Waxbarashada: $ 3,297
Waxbarashada: $ 3,693
Jaamacadda Simon Fraser
Waxbarashada: $ 3,743
Waxbarashada: $ 4,358
Jaamacadda Memorial ee Newfoundland oo leh khidmad waxbarasho oo loogu talagalay barnaamijka masters-ka laga bilaabo ugu hooseeya $ 3000 ayaa sidoo kale ku taal St. Johns oo ah mid ka mid ah meelaha ugu jaban ee lagu noolaado Kanada.
Jaamacadu waxay leedahay noocyo badan oo kala duwan Barnaamijyada Master iyo Doctorate shaqsi ahaan iyo khadka tooska ahba, dhinacyada beeraha iyo cilmiga bulshada, barnaamijyada xirfadeed, barnaamijyada kaladuwan, iyo sayniska.
Iyada oo leh khidmadda waxbarashada shahaadada masters-ka ee ugu hooseysa $ 3,000 ee Jaamacadda Waqooyiga British Columbia, jaamacadda ayaa si raaxo leh ugu dhexjirta jaamacadaha ugu raqiisan Kanada ee qiraya ardayda Kanada iyo kuwa ajnabiga ah.
In kasta oo khidmadaha waxbarashada dib loo eegay oo mararka qaarkood sannad kasta lagu cusbooneysiiyo dugsigan, had iyo jeer waad ogaan kartaa waxa beddelay ama aan ka ahayn bogga rasmiga ah ee barnaamijka qalin-jabinta websaydhka dugsigooda.
Jaamacadu waxay bixisaa shahaadooyin jaamacadeed iyo barnaamijyo shahaadooyin ah oo ay ka mid yihiin MBA, MSc, MEd, MEng, MScN, MSW, Shahaadooyinka Qalinjabinta, iyo barnaamijyada dhakhaatiirta kulligoodna waa qiimo aad u jaban.
Iyada oo ah khidmad aad u hooseeya oo bilaash ah oo ka sarreysa $ 3,500 oo loogu talagalay barnaamijyada shahaadada jaamacadeed iyo barnaamijyo badan oo shahaadada masters-ka ah, Jaamacadda Calgary waxay ku faraxsan tahay mid ka mid ah jaamacadaha ugu raqiisan Kanada ee loogu talagalay shahaadada jaamacadeed ee ka bilaabata inta badan shahaadada mastarka.
Iskuulku wuxuu bixiyaa kooras ku saleysan iyo Master-ku-saleysan cilmi-baaris iyo shahaadada Doctorate ee maadooyin kala duwan oo ka goynaya dhowr daraasadood oo xasaasi ah.
In kastoo mid ka mid ah jaamacadaha caanka ah ee Kanada, Jaamacadda Simon Fraser wali wuxuu kujiraa mid ka mid ah jaamacadaha ugu jaban ee Kanada loogu talagalay barnaamijka masters-ka.
Jaamacadu waxay ku dallacdaa khidmad waxbarasho oo aad u hooseysa oo aad u habboon oo loogu talagalay jeebabka ardayda caalamiga ah.
Barnaamijka Master-ka ee Jaamacadda Simon Fraser wuxuu ka bilaabmaa kharashka waxbarashada ugu hooseeya $ 3,743 laakiin waxyar ayuu ku kala duwan yahay barnaamijyada. SFU shaki kuma jiro inay leedahay qaar ka mid ah barnaamijyada shahaadada mastarka ugu raqiisan Kanada oo dhan.
Jaamacadu waxay leedahay a barnaamijyo qalin-jabin ah oo kala duwan goynta dhinacyada cilmiga sayniska, farshaxanka iyo sayniska bulshada, ganacsiga, isgaarsiinta, farshaxanka & farsamada, waxbarashada, deegaanka, cilmiga caafimaadka, iyo sayniska.
Iyada oo khidmadda waxbarashada shahaadada mastarka laga bilaabo ugu yaraan $ 4,358, Jaamacadda Saskatchewan ayaa laga yaabaa inay tahay mid ka mid ah jaamacadaha ugu raqiisan Kanada barnaamijyada jaamacadeed.
Jaamacaddu waxay leedahay in ka badan 80 shahaadada Master iyo Doctorate. Ku takhasusay cilmi baarista iyo caafimaadka.
Deeqda waxbarasho ee sida buuxda loo Maalgaliyo ee Kanada
Dugsiyada ku yaal Kanada ee leh Cafiska IELTS
Koorsooyinka khadka tooska ah ee bilaashka ah ee Kanada ee loogu talagalay dhammaan Ardayda
Sida wax looga barto Kanada iyada oo aan lahayn IELTS
Shahaadada Masters-ka ee Bilaashka ah ee Online-ka ah oo wata Shahaadooyin
Canadajaamacadaha Canadamasters jaban ee canadashahaadada masters-ka ee ugu raqiisan KanadaJaamacadaha ugu jabankulliyadahaARDAYDA INTERNATIONALwaxbarasho hooseeyashahaadada mastarka hooseeya ee shahaadada canadajaamacadaha waxbarashada hoose ee canadaKhidmadaha Waxbarista Ugu YarU ARAGTAA WAXQABADKAwax ka barta koorta10 sarejaamacadaha
Previous Post:13 Dugsiyada Caafimaadka ee ugu Fiican Cuba
Post Next:Sida loo Codso Jaamacadaha UK - Step by Step Guide
Oluwabunmi ajayi wuxuu leeyahay,
June 25, 2021 at 8: am 50
Waxaan rabaa faahfaahin ku saabsan sida loo dalbado barnaamijkayga masters-ka ee Kanada ama Georgia USA mahadsanidiin kahor
Mai.M wuxuu leeyahay,
June 1, 2021 at 5: am 45
Ajaanibtu ma heli karaan fiisada Kanada hadda, iyada oo loo marayo 19-sano, wax ka yar oggolaanshaha daraasadda ee 6 bilood ah (run ahaantii 3 bilood)?
Hadday haa tahay, ma i siin kartaa faahfaahin?
Preet wuxuu leeyahay,
August 18, 2021 at 12: 57 pm
Haddii aad dalbato waxbarasho taas oo ka yar 6 bilood muddadeeda. Ma heli doontid fiisaha waxbarashada waxaa lagu xisaabin doonaa fiisaha booqdaha ee aad halkaas ku baran karto.
Flavio wuxuu leeyahay,
September 24, 2020 at 3: 06 pm
Waxaan ka imid Boortaqiiska iyo Angola waxaanan jeclaan lahaa inaan helo aqoonyahan buuxa oo cilmiga kombuyuutarka ah waxaan ku dhammeeyey fasalka 11 ee dugsiga sare waxaanan helay in ka badan 15 shahaadooyin IT ah.
Ogundele boluwatife wuxuu leeyahay,
September 24, 2020 at 11: am 39
Waxaan ka imid Nigeria, waxaan rabaa in lay aqbalo mid ka mid ah jaamacadahaaga
September 29, 2020 at 2: 09 pm
Had iyo jeer fiiri oo codso fursadaha deeqaha waxbarasho ee aad ka soo baxdo shuruudaha u-qalmitaanka
Muxammad kudrat-E-Khuda wuxuu leeyahay,
September 3, 2020 at 3: 10 pm
Kani waa kudrat e khuda waxaanan ka imid Bangladesh. Waxaan haystay hal shahaado oo Bechelor ah, 2 shahaadada masters-ka ah ee Suugaanta Ingiriisiga iyo TESOL iyo hal shahaadada masters-ka ee waxbarashada. Hadda waxaan ahay macallin ku tababbaran Ingiriisiga kulliyad. Waqtigan xaadirka ah waxaan rabaa inaan haysto shahaado mastar kale oo laxiriira dhinacyada sida luuqada Ingiriisiga ama waxbarashada Kanada. Fadlan ma iisheegi laheyd waxa aan sameynayo si aan u kasbado shahaadada masters-ka ee xigta?
Sagar wuxuu leeyahay,
September 3, 2020 at 1: 03 pm
Waxaan rabaa inaan wax ka barto oo aan ka shaqeeyo Kanada haddii aad ku caawin karto emaile: sagbhu.123@gmail.com mahadsanid!
Ayuub shaah wuxuu leeyahay,
September 1, 2020 at 5: 42 pm
Waxaan kaloo xiiseynayaa inaan wax ka barto kanda s .Qof baa i caawin kara… qofna wuu i hagi karaa plzzzz…
Lambarkayga WhatsApp 03329141370… plz caawin… Waxaan ka imid Pakistan…
Nabina wuxuu leeyahay,
September 1, 2020 at 3: 33 pm
Mahadsanid Waxaan rabaa inaan ku sameeyo PHD-ga deeqda waxbarasho ee Kanada. Suurtagal ma tahay?
Mahyargh wuxuu leeyahay,
July 12, 2020 at 5: am 56
Fadlan ii soo dir barnaamijyo cusub
Simrat kaur wuxuu leeyahay,
May 12, 2020 at 4: 06 pm
hii, waxaan ahay arday Hindi ah waxaanan rabaa inaan noqdo farmashiiste ku yaal Canada Ma ii soo jeedin kartaa jaamacado ugu raqiisan tan.
aderogba jamiu ayinde wuxuu leeyahay,
June 19, 2019 at 9: 23 pm
Waa salaaman tahay Waxaan aad u xiiseeyaa inaan wax ku barto dibedda iyada oo leh khidmadaha ugu hooseeya ee dugsiga iyo dugsigaas gaarka ah. Simon fraser university sideen uga shaqeeyaa oo aan ushaqeynkaraa iskoolna isla mar ahaantaa fadlan waxaan ubaahanahay jawaab mahadsanid.
Xumaiz Jamil wuxuu leeyahay,
September 2, 2020 at 8: 51 pm
Waxaan jeclaan lahaa inaan dalbado fiisada waxbarasho ee canada ama Australia
Gamaliel Jean Hilaire wuxuu leeyahay,
October 8, 2021 at 2: 20 pm
Waxaan ahay arday caalami ah, waxaan jeclaan lahaa inaan helo shahaado buuxda si aan wax uga barto Kanada ama USA.
Maxamed Daryosh wuxuu leeyahay,
May 24, 2019 at 10: am 45
Waxaan xiiseynayaa inaan fursaddan u helo waxbarasho dibadda ah.